UMbete ngeke acashe ngesithupha odabeni lokuvota ngokuyimfihlo - Ramaphosa | News24
UMbete ngeke acashe ngesithupha odabeni lokuvota ngokuyimfihlo - Ramaphosa
Johannesburg – IPhini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lithi uSomlomo wePhalamende uBaleka Mbete uzothatha isinqumo asesitshubungulwe kahle ngemuva kokuba iNkantolo yoMthethosisekelo ngeledlule ithe unamandla okuthatha isinqumo ngokuvota okuyimfihlo.
NgoLwesine olwedlule, inkantolo yakhipha isinqumo sokuthi uMbete unamandla okuthatha isinqumo ngendlela yokuvota esiphakamisweni sokungethenjwa kobuholi bukaMengameli Jacob Zuma.
Lolu daba lalufakwe enkantolo yi-United Democratic Movement, Economic Freedom Fighters neCongress of the People ngenyanga edlule.
OLUNYE UDABA: Uzovela enkantolo osolwa ngokubulala isisebenzi sakwa-Eskom
URamaphosa utshele i-Eyewitness News ukuthi uyahambisana nesinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo futhi uMbete ngeke asacasha ngokuthi akakwazi okumele akwenze.
“Ngeke futhi acashe ngesithupha athi ‘anginawo amandla’.
Ngeledlule, inkantolo yathi uMbete wayenephutha uma ethi uMthethosisekelo noma imithetho yePhalamende ayimvumeli ukuba agunyaze ukuvota okuyimfihlo.